पाकिस्तानमा भारतीय फिल्म प्रतिबन्ध
काठमाडौं, साउन २४-पाकिस्तानले भारतीय फिल्ममाथि प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। सूचना तथा प्रसारणका लागि प्रधानमन्त्रीका विशेष सहायक डा. फिरदोस आशिक अवानले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानमा कुनै पनि फिल्म प्रसारण नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
जम्मु कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० भारत सरकराले सोमबार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले भारतसँग राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध कम गर्नको लागि कदम चालिसकेको छ।
डा. फिरदोसले कश्मीरको पक्षमा पाकिस्तानले सबै किसिमको विकल्प अपनाउने बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई समेत कश्मीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन आग्रह गरेका छन्। यसका साथै पाकिस्तानले कश्मीरको दुर्दशाको बारेमा उजागर गर्ने बताउँदै आएको छ।
योभन्दा अगाडि पनि पाकिस्तानले भारतीय फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् २०१९ को फेब्रअरीमा भारतीय सेनाले गरेको हवाई प्रतिबन्ध ‘एयर स्ट्राइक’ पछि पाकिस्तानले भारतीय फिल्म रिलीज गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पाकिस्तानका तत्कालीन सूचना तथा प्रशारण मन्त्री चौधरी फवाद हुसेनले बलिउड फिल्म प्रसारण नगर्न सूचना जारी गरेका थिए। उनले भारतीय फिल्मका साथसाथै ‘मेड इन इन्डिया’ विज्ञापन समेत बहिस्कार गरेको घोषणा गरेका थिए। यता, भारतले पनि ‘पुलवामा आग्रमण’ पछि पाकिस्तानी अभिनेता तथा अभिनेत्रीलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै फिल्म रिलीज नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।
अमेरिकामा १ सय २२ जना मेक्सिकन नागरिक पक्राउ